नेपालका गोर्खाली सैनिकलाई लिएर एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ- ‘यदि कसैले मर्न डर लाग्दैन भन्छ भने या त उसले झुट बोलिरहेको छ वा ऊ गोर्खाली हो।’ भारतीय सैनिकको सर्वोच्च अधिकारी तथा भारतको सैन्य इतिहासकै सबैभन्दा साहसी र सफल सैन्य अधिकारीमध्येका फिल्ड मार्सल साम मानेकसाको भनाइ हो !!
आज पुरै विश्वमा आतंकविरोधी मिसनहरु चलिरहेका छन् । हतियारका भरमा आतंकवादीहरु आफ्नो माहौल बनाउने रणनीतिमा रहेका छन् । आतंकवादीहरुका कारण प्राय अधिंकाश देशहरुमा भयावह अवस्था रहेको छ । यी आतंकवादीहरुलाई तह लगाउन सैनिक जवानहरु आफ्नो ज्यानको माया मारेर रणभुमिमा उत्रिएका हुन्छन् । सुरक्षा बलका कारण देशका जनताहरुले राहतको महसुस गर्छन्। तर, केही यस्तै घटना भएका छन् जसले आतंकवादीहरुको साहसलाई एक सैनिकले नै चुरचुर पारिदिएका छन् ।
जब दीपप्रसादले आफु चौतर्फी रुपमा घेरिएको थाहा पाए तब उनले दरो मनोबल पार्दै उनीहरुसँग भिड्ने निर्णय लिए । दुवैतर्फबाट गोली हानाहान भयो । उनले ग्रेनेड फाले । ग्रेनेड र राइफलको प्रयोग तालिवानी लडाकुले पनि गरे । तालिवानी लडाकुलाई उनले पनि आफुसँग भएका हतियारले कडा जबाफ दिए । उनको मदतका लागि अन्य सेना आइपुग्दा उनले ३० जना तालिवानी लडाकुलाई मारिसकेका थिए ।
फस्ट बटालियन गोर्खा राइफलमा कार्यरत सैनिक जवान दीप प्रसाद पुनलाई सन् २०१० सेप्टेम्बर १७ को राति अफगानिस्तानमाको हेल्मन्ड प्रान्तको बाबुजी एरियामा खटिएका बखत देखाएको अदम्य साहसको आज पनि विश्वभर उत्तिकै चर्चा हुने गरेको छ । उनको जन्म म्याग्दीको पश्चिम् बिम गा.बि स मा भएको हो । बेलायती सेनामा आवद्ध उनले सान्ती सेनाको रूपमा अफगानिस्तान कार्यरत छदाँ उक्त बहादुरी देखाएका हुन्
करिब १५ मिनेटको भिडन्तमा दिप प्रसाद पुन ले ३० जना भन्दा बढी तालीवानीहरुलाई धुलो चटाएका थिए । उनको साहसिकपनको कदर गर्दै बेलायतका रानीले भिक्टोरिया क्रस सम्मान गरेकी प्रदान गरेकी थिइन्। ‘आफू मर्नुभन्दा पहिले सकेसम्म धेरैलाई मान्नुपर्छ भन्ने दृढ निश्चयका साथ लडिरहें ।’ उनले बताएका थिए । सन् २००० मा बेलायती सेनामा भर्ती भएका पुनका हजुरबा र बाबु पनि बेलायती सेनामै कार्यरत थिए ।
Previous फेरी अस्ताए यी चम्किला तारा ! स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको कारण उनको अस्पतालको आ,इसियुमै नि,धन